जीवनशैली Archives - Page 15 of 16 - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
उदयपुरमा नेत्र ज्योतीको एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ
उदयपुर, ६ मंसिर । नेत्रज्योती संघ उदयपुरले ग्रामिण समुदाय र दलित समुदायलाई विशेष सुविधाका साथ सोमबारदेखि एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ गरेको छ । भारतीय राजदुतावासबाट सहयोग स्वरुप एम्बुलेन्स पाएपछि संघले एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ गरेको हो । एक समारोहकाबीच त्रियुगा नगरपालिकाका सबैभन्दा जेष्ठ दलित नागरिक ९४ बर्षीय रत्नबहादुर परियारले रिवन काटेर एम्बुसेन्स सेवाको प्रारम्भ गरेका छन् । सेवा प्रारम्भसंगै...
पाँचथर क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हुन भीष्मराज आङदेम्बे । उनी अहिले संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति समेत छन् । उक्त समितिले उद्योग वाणिज्य साथै उपभोत्ता हितको विषयमा छलफल र आवश्वयकता अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । आङ्देम्बे सभापति भएयता सो समितिले गरेको कार्यले निक्कै चर्चा पाएको छ । आङ्देम्बेलाई पाँचथरवासी एक हक्की, साहसीलो र बहुआयमीक ने...
यस वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म जिल्लाका २४ गाविसका १ हजार ३ सय ११ बालबालिका मध्ये २ सय ४९ बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम मुगुले जनाएको छ । रातापानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खनाय, नाथर्पु, माँग्री, श्रीकोट, काँलै स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालमा शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमको तथ्याङ्कमा छ । महिनादेखि माथि र पाँच वर्षमुनिका १ हजार ३ सय १...
गाँजा खाएर सवारी चलाए पनि कारबाही
मादक पदार्थ सेवन गरेर मात्र होइन, गाँजालगायत लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई पनि प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ । मदिराभन्दा लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना अझ बढी हुने भएकाले प्रहरीले उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्न थालेको हो । नगरकोट सडक क्षेत्रमा गाँजा सेवन गरेर सवारी चलाउनेको संख्या धेरै रहेको खुलेपछि प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।...
कुरै नबुझी मलेसीया आएका केपी अधिकारीको दांतमा कसरी ढुंगा लाग्यो थाहा पाउन यो पढ्नुहोस् मलेसियाको पीडा
मेरो प्रवास बसाई करिब दुई बर्ष हुन लाग्यो । प्रवास सोचे जस्तो नहुनुमा ऐजेन्टको पनि ठूलो हात हुदो रहेछ भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष देखेको छु । म लगायत पाँचथरका दुई जना र सिन्धुपाल्चोकका तीजना गरी जम्मा छ जना एउटै ऐजेन्सीबाट सन् २०१४ मा मलेसियाको लागि उडेका हौँ । हामीलाई ऐजेन्सीले उडानको बिहान मात्र त्रिभुवान विमानस्थलमा डकुमेन्ट दियो । ती डकुमेन्ट दुईखाले थिए । एउटा नेपालको एयरपोर्टमा देखाउने, अर्क...
महापर्व छठको मुख्य पुजाको पूर्व सन्ध्यामा विराटनगरको बुधहाट चोक र गुद्री बजारमा शनिबार बिहानदेखि अबेर रातिसम्म किनमेल गर्नेहरु ओइरिए । यहाँका अधिकांश मधेसी र पहाडी समुदायले यो पर्व मान्ने हुनाले यी हाट एवं बजारहरु महामेलाकै रुपमा परिणत हुन्छ । ताजै चढाउने मान्यताअनुरुप पर्वको एक दिन अगाडि काँचो फलफूल, तरकारी एवं मिठाइको हाट लाग्छ । यसलाई पर्वको अन्तिम बजार पनि भनिन्छ । ब्रतालु एवं दर्शनार्थीले ...
अनावश्यक शरिरका रौं हटाउन हेअर रिमुभल
यसका बारेमा प्राय सोधिने प्रश्नका उत्तरहरु :- लेजर हेअर रिमुभल के हो ? एउटा विशेष प्रकारको बत्तीको किरण प्रयोग गरी शरीरमा भएका अनावश्यक रौं हटाउने प्रक्रियालाई लेजर हेअर रिमुभल भनिन्छ । यसले बढ्ने प्रक्रियामा रहेका रौंका जरालाई मार्ने काम गर्छ जसले गर्दा फेरि त्यही जराबाट नयाँ रौं पलाउँदैन । कुनै पनि समयमा २० प्रतिशत रौं मात्र बढ्ने क्रममा हुने हुँदा सन्तोषजनक रिजल्टका लागि एक–एक महिनाको...
जनमुक्ति सेनामा पनि दुईवर्ष बसेकी थिईन् मिरा । घरको आर्थिक अवस्थाले त्यता लागेकी थिईन् । अघिल्लो वर्ष उनि काठमाण्डौ पसिन् । उनको साथमा थियो हरियो पासपोर्ट । एउटै उद्येश्य थियो उनको । अब विदेश गएर पैसा कमाउने । विदेश गएको भए कतै गुमनाम हुने थिईन । कसैले चिन्थेन होला । तर अहिले उनले देशकै नाम राख्न सफल भएकी छिन् । अहिले आफ्नो विगतका ति दिन धमिल्लीएको छ । सम्भावनाका किरणहरु देखिन थालेका छन् । यो अवसर...
कोरोनाभाइरसबाट विश्वमा १० लाख भन्दा बढीको मृत्यु , तीन करोड ३३ लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित
कोरोनाको रिपोर्ट जे आएपनि सम्बन्धितलाई जानकारी गराउन निर्देशन
थप १० जनाको मृत्यु कोरोनाबाट मृत्यु, कुल संख्या ४७७ पुग्यो
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५७३ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि